Taariikh Nololeedka Power Star Sridevi Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikhda: February 24, 2019
Sridevi waxay ahed atirisho, Film maalgaliso ayadoo kasoo shaqeysay guud ahaan shirkada kala duwan India aflaamta sameyaan sida Tamil, Telugu. Hindi, Kannada iyo Malayalam, waxayna hanatay inee gaarto darada atirishadii ugu horeysay ee magac “Super Star” loogu yeero.
Waxay ku guulesatay abaal marinta Filmfare Awards tiro 5 jeer ah qeybaheda kala duwan sido kale 80kii iyo 90kii waxay ku jirtay xidigaha mushaarka ugu badan aflaamta ku sameyaan ayadoo loo aqoonsaday xiligaas atirishada ugu awooda badan uguna magac weyn.
Sanadkii 2013 dowlada India Sridevi waxay siisay abaal marinta Padma Shri oo ah abaal marinta 4aad ee ugu darajada sareysa taaso la siiya muwaadin India ah oo dalkiisa wax badan u qabtay shakina kuma jirin Sridevi mudadii ay fanka ku jirtay inee qeyb ka qaadatay sare uqaadida fanka hindiya.
Sridevi waxay guursatay qarash gareye Boney Kapoor oo ay u dhashtay 2 gabdhood Jhanvi iyo Khushi,xidigtaan ayaa maanta loo dhigayaa xuska geerideeda maadama maanta oo kale 24 Feb geeriyootay.
Sridevi Iyo Bilawgii Nolosheeda Iyo Marxaladihii Ay Soo Martay:
Sridevi magaceeda dhabta ah waa Shree Amma Yanger Ayyapan balse magaca Srdievi ayaa in badan loo garanaya waxay ku dhalataya gobolka Madras xaafada Sivakasi ee dalka India aabahed waxaa lagu magacabaa Ayyapan waana reerTamil halka hooyaded reer Telugu tahay laguna magacaabo Rajeswari.
Aabhed waxuu ahaa xidigtaa qareen ama abuukate waxaana la dhalatay hal gabar ayadoo ay xidigtaan taariikh ahaan dhalatay 13 bisha Aug 1963 waxayna geeriyootay ayadoo 54 sano jirto, mudadii yaraanteda waxay jeclaan jirtay qaab jiliinka oo ayadoo yar ayeeba fanka soo gashay.
Sridevi iyo Sida Ay Fanka Kusoo Gashay Ayadoo Yar Caruur Ah (1967-1975)
Sridevi waxay nasiib u yeelatay in ay fanka soo gasho ayadoo aad u yar misane 4 jir ah filmkedi ugu horeyay oo ay kasoo muuqato waxuu ahaa film Tamil ah Thunaivan waxayn kulaheed door muhiim ah filmkaan ayadoo aad u yar sido kale filmkeda ugu horeyay ee Telugu waxuu ahaa Maa Nanna Nirdoshi (1970).
Balse Sridevi wax qabadkeeda caruurnimo iyo xirfadeeda heerka sare ah waxuu soo shaac baxay markii ay sameysay filmkii Malayalam-ka ahaa Poompattah (1971) waxayna filmkaan ku qaadatay abaal marinta Filmfare qeybta caruurta sanadkaan wax jileen midi ugu wanaagsaned Filmfare Best Child Artist ee gobolka Kerala.
Waxii markkaas kadambeyay Sridevi xirfadeda ayaa lala dhacay waxayna noqotay doowa kowaad ee filmsameyaasha koonfur India dhanka caruurta ayado sameysay aflam badan ilaa ay kasoo qaan gaarto.
Sridevi waxay markaas u dalacday inee u shaqo doonato dhanka Bollywoodka oo ah shirkada ugu weyn aflaamta dalka India waxayna kusoo caan baxday dhalka Bollywoodka filmkii Julie ayadoo door muhiim ah ku lahed mashruucan waxaana la daawaday sanadkii 1975 atirishadii bari samaadki Lakshmi ayaana hogaamiye ka ahed halka Sridevi Lakshmi walashed ku jileysay.
Sridevi Iyo Markii Ay Atirisho Buuxdo Noqotay Guul Taariiki Ahna ka Gaartay Koonfur India (1976-1982)
Maadama ay aflaam doorar iska caadi ah ay filmada ku jileysay Sridevi markaan waxay bilaawday inee atirisho buuxdo ka noqoto aflaamta waxayna sameysay sanadkii 1976 filmki ugu horeyay ee ay atirisho buuxdo ka noqoto kaaso koonfur hindiya ahaa.
Waxay kusoo caan baxday dhanka hogaaminta atirisho buuxdo film ah filmkii Moondru Mudichu kaaso ah mashruuc guul wacan gaaray sido kalena ay Sridevi aqoonsi ku heshay.
Waxaa u xigay aflaam badan oo ay lasameysay Kamal Haasan iyo Rajnikanth oo xiligaas koonfur hindiya atoorayaal dhalin ah ka ahaayen.
Sridevi waxay noqotay xidig caalami ah oo laga daba dhaco sido kalena aqoonsi weyn ka heshay dhanka koonfur India waxaana ay gaartay heer loogu Waco Amitabh Bachchan-ka koonfur Hindiya, ayadoo guulo waaweyn kasoo hoyisay fanka koonfured aye xidigtaan goaan ku gaartay inee Bollywoodka awood ku qabsato maaadam ay koonfur awood ku qabsatay.
Sridevi Iyo Markii Ay Bollywoodka Soo Gashay Sido Kalena Awooda Ku Qabsatay (1983-1997)
Sridevi waxay koonfur india ku xifaaltami jireen atirishada Jaya Prada sida awged halmar aye soo wada galeen Bollywoodka ayagoo isku sanad aflaamtoda lawada saaray Sridevi waxay atirisho buuxdo ka noqotay filmkii Solva Sawan(1979) kaaso ay la jishay Amol Patekar.
Nasiib xumo Sridevi filmkaan waxuu ka noqday mid guuldaresta oo an ganacsi fiican sameynin sido kalena aqoonsigii ay Bollywoodka ka rabtay kuma aysan helin halka Jaya Prada filmkeda kowaad ee isla sanadkaan soo baxay filmkii Sargam ee ay Rishi Kapoor la sameysay waxuuna noqday Hit weyn filmkaan.
Sridevi ayaa dadaalkeda bartiisa kasii waday waxayna 4 sano kadib la timid filmkii Himmatwala ee la daawaday sanadkii 1983 waxaana filmkaan atoore ka ahaa Jeetendra.
Inaba caadi ma aha bandhiga taariikhiga ah ee Sridevi filmkaan ku muujisay waxuuna noqday mid kamid ah Hits-ka ugu waaweyn sanadkaas sameyaan iyo mid kamid ah aflaamta lacagaha ugu badan soo xareyaan sanadkaan.
Sridevi aqoonsigii ay Bollywoodka ka rabtay si fudud aye filmkaan ugu heshay ayadoo noqotay atirisho laga daba dhaco waxaana u xigeen aflaam badan oo ay wada saxiixatay guulo wacana u gaaren.
Intii u dhaxeysay 1983-1988 Sridevi iyo Jeetendra waxay wada sameyeen 16 film maadama ay Sri abaal weyn u heyso Jeetendra oo soo caan bixiya xidig weyna uu kadhigay xiligaasna waa la isku xaman jiray xidigan inuu xiriir jaceyl ka dhaxeyo waxaana xusid mudan in 13 film kamid ah ay guulesten 16-ka film halka sedex film kaliya ka guul daresteen.
Sanadkii 1984 Sridevi waxay kamid noqotay atirishooyinka ugu awooda badan Bollywoodka hadafkeedina wey gaartay maadama filmked Tohfa ee ay Jeetendra la waday uu noqday filmka lacaga ugu badan sanadkaas keeno ayadoo Sridevi Big Star noqotay.
Intaa kadib waxaa xidigtaan u xigeen oo ay atirisho ka noqotay aflaam taariikh ah oo Classic noqdeen sida Chaalbaaz, Aakhire Raasta, Mr.India, Chaandni, Laadla, Judaai, iyo kuwa kale oo badan.
Sridevi waxay gaartay heer la dhao Amita Bachchan-ka naagta ah maadam ay awood buuxda kula wareegtay fanka hindiya waxay bilawday inee aflaamta kusameyso lacago waali ah xitaa atoorayaasha qaarkod aye mushaar ahaan ka sareysay.
Waxay iska diiday inee Amitabh Bachchan film la sameyo sido kalena ayadoo sheegtay in Big Bachchan filmada uu isaga awooda oo dhan la wareegayo halka ayadana ay dooneyso awooda filmada inee ayada la wareegto inkastoo aflaam dhowr ah la sameysay.
Sanadkii 1992 Sridevi waxay iska diiday filmkii Blockbuster-ka weyn noqday Beta oo ay wada jileen Anil Kapoor iyo Madhuri Dixit ayadoo sheegtay in Anil Kapoor uu ka bad batay side film ula sameyneeysay walo markii dambe ay la shaqeysay balse Sridevi xiligaas awoodeda fanka aye gacanta kasaartay Madhuri Dixit maadama filmkaas Blockbuster weyn noqday.
Qaar kamid ah aflaamta Sridevi ay hogaamiyaha ka noqotay ayadoo ay atoorayaasha filmka kaga awood badned filmka door ahaan.
Mr.India- waxay la jishay Anil Kapoor ayada ayaana kaga saameyn badan filmkaan halka Amirsh Puri hogaamiyaha sedexaad yahay.
Nagina- waxay la jishay Sunny Deol oo xiligaas Super Star weyn ahaa ayada ayaana kaga awood badatay filmka doorka ugu weyn filmkana ayada ayaa jileyso inaba caadi ma aha.
Chaalbaaz- waxay la jishay Super Stars kala ah Sunny Deol iyo Rajnikanth waana mid kamid ah Hits-keda ugu waaweyn filmada ay sameyay waxayna filmkaan ku jileysaa laba door waxaana xusid mudan filmka oo dhan inee iyada wadato halka atoorayasha filmkaan sharaxaad ahaan ama heesaha filmka inee iyada la qaadan u joogan.
Sido kalena doorar caawiyaal ah aye ku leeyihiin maadama ay caawinayaan Sridevi balse awooda filmka Sridevi ayaa gacmaha loo galiyay.
Chandni-waxa la jishay Rishi Kapoor iyo Vinod Khanna oo ahaayen xidigo waaweyn balse waxaa xusid mudan in filmkaana Sridevi kaga awood badatay atoorayasha filmka ayadoo doorka ugu weyn la siiyay iyo hogaamintiisa.
Laadla- Inaba caadi ma aha sida ay filmkaan kibrika ugu jishay waana mid kamid ah aflaamta laga xasuusan doono xidigtaan waxana atoore ka aha Anil Kapoor oo ay xiligaas shaashada kaga awood badnaan jirtay.
Laadla oo dhan Sridevi ayaa iska leh oo uu kusocdaa iyada ayaana hogaamiye ka ah ayadoo kaga saameyn badnaatay Super Star Anil Kapoor.
Judaai-Lalama yaabayo Sridevi waayo waxay caado ka dhigatay inee Anil Kapoor shaashada ku garaacdo heer waxay gaartay inee ninkeda gadato inaba caadi ma ahan filmkaan sida ay u jishay iyo hogaaminta filmka oo dhan ayada ayaa gacmaha loo galiyay.
Waxaa kaloo kamid ahaayen aflaamta ay atoorayasha kaga awood badatay sida Gumrah oo ay Sanjay Dutt la sameysay, Army SRK (Muuqal marti ah ) aye la sameysay Mom, Meri Biwi Ka Jawaab Nahi oo ay la sameysay Akshay Kumar, Chandra Mukhi iyo kuwa kale oo badan.
Lama tiring karo filmada Sridevi ay hogaamiyaha ka noqtay sido kalena ay shashada kaga awood badatay atoorayaasha filmka.
Sridevi waxay ka qeyb qaadatay barnaamijyo badan oo Tv-yada ka baxa sido kalena filmkeeda udambeyay ee Bollywoood ah waxuu ahaa Mom oo ay hogaamiye ka ahed waxaana la daawaday sanadkii hore 2017 waxuuna noqday film ganacsi ahaan guuldarestay balse bandhigeda aad loogu amaanay.
Sido kale waxay muuqaal marti ah kulahaan doonta filmka Zero ee SRK hogaamiyaha ka yahay kaasona dhamaadka sanadkana la daawan doono.
Sridevi Iyo Nolosheeda Gaarka Ah Iyo Dhimashadeeda:
Sridevi waxaa lagu xantay inuu xirir jaceyl kala dhaxeyay atooraha Jeetendra sido kale waxaa la sheegay in Mithun Chakraborty ay si waali ah u jecleyd sido kalena guur qarsoodi ah ay wadaagen dhamaadkii 80kii.
Ugu Dambeyn sanadkii 1997 waxay guursatay qarash gareye Boney Kapoor waxayna u dhashtay 2 gabdhood oo kala ah Jhanvi Kapoor iyo Khushi Kapoor.
Jhanvi filmkeda kowaad ee Bollywoodka ah sanadkii hore ayaa la daawaday waana Dhadak waxana la hogaaminaya Ishaan Khattar halka Khushi la sugaayo inee soo gasho Bollywoodka Sido kale Sridevi waxay eedo u tahay wiil iyo gabar kale oo uu dhalay Boney Kapoor kuwaso kala ah Arjun Kapoor waa atoore filmada jila iyo Arshula Kapoor oo Arjun isku hooyo yihiin.
Sido kale Sridevi dumaashiyaalkeda waa Anil Kapoor iyo Sanjay Kapoor oo labaduba ay la dhashteen Boney Kapoor Sridevi waxay ka qeyb gashay aroos qaas ah oo lagu casuumay waxuuna ka dhacay Dubai halka ay la jireen gabadheda Khushi Kapoor iyo Seygeeda Boney Kapoor.
Sridevi ayaa la sheegay sanadkii hore maanta oo kale 24 Feb xili habeenimo ah ayee ku geeriyootay Dubai xili ay arooskaas ka qeyb galeesay waxaana la sheegay inee ku hafatay biyo waasko suuligeeda ah.
Abaal Marinada Ay Sridevi Ku Guulesatay:
National Film Awards ayee ku guulesatay qeybta atiriishada ugu wanaagsan filmkeeda Mom sanadkii hore ayeena dowlda qoyskeeda gudoonsiiyeen.
Filmfa Awards- waxay ku guulesatay tiro 5 jeer ah oo ay isugu jirto Filmfare-ka Bollywoodka ka dhisan iyo mida koonfured ab waxayna kala yihiin….
Chaalbaaz (1990) Atirishada ugu wanaagsan Bollywood-ka
Lamhe (1992) Atirishada ugu wanaagsan Bollywood-ka
Kshana Kshanam (1991) Atirishada ugu wanaagsan Telugu
Meendum Kokila (1982) Atirishada ugu wanaagsan Tamil
Vayathinile (1977) abaal marin qaas ah koonfur India oo dhan loogu soo xushay.
Zee Cine Award waxay gudoonsisay sanadkaan abaal marinta atirishada ugu wanaagsan filmka Mom waxaana jiraan abaal marino kale oo iska yar yar hadana badan balse kuwa ugu muhiimsan wa intaas….